Mapikicha eApple, dhawunorodha matsva matsva | IPhone nhau
Mapikicha e iPhone
Kunyangwe Apple inowanzo wedzera fondos de pantalla inokwezva kwazvo mushanduro imwe neimwe nyowani yeIOS, ichokwadi zvakare kuti inobvisa vamwe izvo vazhinji vedu takafarira, rinova dambudziko. Kunyangwe iyo internet izere nemapikicha akanaka, dzimwe nguva hazvisi nyore kuwana imwe yatinoda.
Nhanho inokurumidza kwazvo kuwana iyo desktop desktop, chokwadika, ndeyekuisa mifananidzo paGoogle nezve izvo zvatinoda kuve nazvo kumashure pane yedu iPhone, asi kazhinji, mifananidzo yatinowana ine yakashata kwazvo mhando kana isina fomati inodiwa kuti ive tarisa zvakanaka pane iPhone. Naizvozvo, zvakanakisa kusave neicho chakati zano, kana zvisiri kusarudza pakati pezviuru zvemakomputa emadziro ayo atinogona kuwana mairi mawebhusaiti akakumikidzwa kumaturu.
Kana iwe uchibvumirana neni uye uchida kutora kufamba kuburikidza nemazana e mamiriro anonakidza e iphoneHeano mamwe mazano:
iPhone Mapikicha paFlickr
Zvinonyanya kuitika kuti mune ramangwana mamwe mawebhusaiti aya anenge asingashande. Kana zvirizvo kuti iwe usingawane izvo zvaunoda pane aya mawebhusaiti, iwe unofanirwa chete kutsvaga iyo internet «yemahara iPhone Wallpaper«,« IPhone Wallpaper yemahara »kana zvakafanana zvinhu. Iwe unowana akawanda mawebhusaiti uko iwe zvechokwadi uchawana homwe kune yako yaunoda.
Kana iwe uine kusahadzika nezvekuti ungachinje sei Wallpaper pane iyo iPhone iwe unofanirwa kudaro tevera dzidziso yedu umo, kuwedzera kune dzidza maitiro avanochinja, iwe zvakare une mamwe matipi anowanikwa.
Iwe unoziva mamwe mawebhusaiti kurodha mifananidzo yeiyo iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Mapikicha e iPhone
Pane chero munhu anoziva kwandinogona kuwana Mifananidzo yemireza yenyika dzakasiyana? Kubva kuFrance, Germany, nezvimwe.
Pindura kuna Olé
Navtophoto inotibvumidza kuti tione kero yemifananidzo yatinotora
Dzidziso Yemahara itunes account uye iwe unogona kudhawunirodha mabutiro eacds